DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA NVIDIA GEFORCE GT 630 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Download ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka NVIDIA GeForce GT 630 kaadị ndịadị
Kaadị vidiyo bụ otu n'ime ihe ngwaike nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kọmputa ọ bụla. Dika ngwaike ọ bụla, ọ chọrọ ndị ọkwọ ụgbọala iji hụ na ọ dị mma. Isiokwu a ga-atụle ebe ị ga-ebudata na otu esi arụnye ngwanrọ maka ihe ntanetị ndị na-emepụta GeForce GT 630 si na NVIDIA.
Chọọ ma wụnye software maka GeForce GT 630
Maka ọtụtụ ngwaọrụ arụnyere ma ọ bụ jikọọ na PC, enwere ọtụtụ nhọrọ ịchọta ma wụnye software dị mkpa. Kaadị vidiyo, nke a ga-atụle n'okpuru ebe a, abụghị otu n'ime iwu a.
Nke mbụ, na mgbe naanị otu ebe ị ga-achọ ndị ọkwọ ụgbọala maka ihe ọ bụla ngwanrọ nke kọmpụta ma ọ bụ laptọọpụ bụ ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti rụrụ. Anyị ga-amalite ya.
Chọọ ma budata
NVIDIA ukara website
Isoro njikọ ahụ n'elu, jupụta mpaghara niile, na-ahọrọ ụkpụrụ ndị a site na nchịkọta ọdịda:
Ụdị Ụdị - Na-akwado;
Ngwaahịa usoro - ... Usoro 600;
Ezigbo Ezinụlọ - GeForce GT 630;
Sistemụ arụmọrụ bụ ụdị nke OS ị rụnyeworo na njiri omimi ya;
Asụsụ - Russian (ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na uche gị).
Mgbe afọ juru gị na ozi ị banyere bụ eziokwu, pịa "Chọọ".
Mgbe mpempe weebụ ahụ na-agbụ, gbanwee na taabụ "Ngwa Nkwado" ma chọpụta ihe nlereanya gị na listi ndị ntanetị. Nnukwu obi ike na ndakọrịta nke ngwanrọ components na ígwè adịghị emerụ ahụ.
N'elu elu nke otu peeji ahụ, pịa "Download ugbu a".
Mgbe ị pịrị njikọ njikọ na-arụ ọrụ ma gụọ usoro ikikere (nhọrọ), pịa bọtịnụ ahụ "Nabata ma budata".
Ọ bụrụ na ihe nchọgharị gị chọrọ ka ị dee ebe iji zọpụta faịlụ ahụ, mee ya site na ịhọrọ nchekwa kwesịrị ekwesị na ịpị bọtịnụ ahụ. "Download / Download". Usoro nke ịkwado onye ọkwọ ụgbọ ala ga-amalite, mgbe nke a gasịrị, ị ga-aga n'ihu ya.
Ntinye na kọmputa
Gaa na folda ahụ na faịlụ nbudata ebudatara ma ọ bụrụ na egosighi ya na ebe nbudata nke ihe nchọgharị weebụ gị.
Kwalite ya site na ịpị ugboro abụọ na LMB (bọtịnụ òké aka ekpe). Igwe nchịkọta nwụnye gosipụtara na ị nwere ike ịgbanwe ụzọ maka iwepu na ide ihe niile software. Anyị na-akwado ịhapụ ndekọ ndabara ma na ịpị bọtịnụ ahụ. "OK".
A ga-amalite usoro ịmepụta onye ọkwọ ụgbọala, ọ ga-ewe oge.
Na windo "Njikọ Usoro Nyochaa" echere ruo mgbe ịchọrọ OS gị maka nhazi na ngwanrọ a ga-arụnyere. Ntucha, nchoputa di nma.
Hụkwa: Nsogbu nrụpụta nsogbu na NVIDIA ọkwọ ụgbọ ala
Na window Installer nke na-egosi, gụọ usoro nke nkwekọrịta ikike ma nabata ha site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
N'oge a, ọrụ gị bụ ịchọpụta nhazi usoro nke ndị ọkwọ ụgbọala ahụ. "Gosi" wepụtara na-akpaghị aka ma akwadoro ndị ọrụ na-enweghị ahụmahụ. Ọnọdụ a na-emetụta ọbụna ma ọ bụrụ na arụnyere NVIDIA software na kọmputa gị. "Omenala" ndị kwesịrị ekwesị maka ndị toro eto na-achọ ịhazi ihe niile maka onwe ha ma na-achịkwa usoro ahụ. Mgbe i kpebiri ụdị ụdị ahụ (na ihe atụ anyị, nhọrọ nke abụọ ga-ahọrọ), pịa bọtịnụ ahụ "Na-esote".
Ugbu a ịkwesịrị ịhọrọ components nke software ga-arụnyere n'ime usoro. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-edozi ndị ọkwọ ụgbọala maka kaadị gị ma ọ bụ na ị gaghị eche na ị bụ onye ọrụ nwere ahụmahụ, ị ​​ga-ahapụ igbe dị n'akụkụ nke ọ bụla n'ime ihe atọ ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi ihe ụfọdụ ị ga - eji wụnye ngwanrọ ahụ nke ọma, mgbe ị na - ehichapụ faịlụ ochie na data nke nsụgharị ndị gara aga, lee igbe dị n'okpuru "Gbaa ngwaọrụ dị ọcha". Mgbe ịmechara ihe niile ka i jiri ezi uche gị mee ihe, pịa "Na-esote".
Usoro nhazi nke ọkwọ ụgbọ ala vidiyo na ihe ndị ọzọ ga-amalite. Nke a ga - ewe oge ụfọdụ, mgbe ihuenyo nwere ike gbanyụọ ugboro ugboro ma gbanyegharịa. Anyị na-akwado ịkwụsị iji ma na-agba ọsọ ọ bụla mmemme.
Mgbe ịmechara nke mbụ (na isi) na Wizard Wizard window, ị ga-eme ka ị malitegharịa kọmputa ahụ. Mechie ngwa niile eji eme ihe, chekwaa akwukwọ mepee ma pịa Megharia Ugbu a.
Ihe dị mkpa: Ọ bụrụ na ịnweghị pịa bọtịnụ na windo installer ahụ, PC ga-amalitegharịa na-akpaghị aka 60 sekọnd mgbe oge ahụ pụtara.
Mgbe kọmputa malitegharịrị, a ga-arụzi ọrụ NVIDIA ọkwọ ụgbọ ala, yana usoro ya onwe ya, ka ọ gaa n'ihu. Mgbe a rụchara ya, a ga-egosipụta obere akụkọ ga-egosipụta ndepụta nke components arụnyere. Mgbe ị gụsịrị ya, pịa bọtịnụ ahụ. "Mechie".
Na NVIDIA GeForce GT 630 ọkwọ ụgbọala ga-arụnyere na usoro gị, ịnwere ike ịmalite iji ike na-eji njirimara niile nke nsụgharị ndị a. Ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi ihe ụfọdụ ka usoro nchịkọta software a dabara gị, gaa n'ihu.
Usoro 2: Ọrụ Ntanetị
Na mgbakwunye na nbudata onye ọkwọ ụgbọ ala ozugbo site na saịtị ọrụ, ị nwere ike iji ike nke ọrụ jikọtara n'ịntanetị.
Rịba ama: Anyị anaghị akwado iji nchọgharị Google Chrome na ngwọta yiri nke ahụ dabeere na Chromium iji mezue usoro a kọwara n'okpuru.
Ọrụ NVIDIA Online
Mgbe ịpịrị njikọ n'elu, usoro nyocha nke sistemụ arụmọrụ gị na ihe ntanetị arụnyere arụnyere ga-amalite na akpaghị aka.
Na-eche na ị nwere ụdị nke Java nke arụnyere na kọmputa gị, windo ahụ egosipụtara na foto dị n'okpuru a na-egosi Pịa bọtịnụ ahụ "Gbaa ọsọ".
Ọ bụrụ na Java adịghị na usoro gị, ọrụ ntanetị ga-enye ọkwa na-esonụ:
Na windo a, ịkwesịrị ịpị akara ngosi akara na nseta ihuenyo. Omume a ga-eme ka ị banye na saịtị ntanetị nke components nke ngwanrọ achọrọ. Pịa bọtịnụ ahụ "Download Java maka n'efu".
Na peeji nke ọzọ nke saịtị ị ga-achọ pịa "Kwekọrịta ma malite nbudata n'efu"wee gosi nkwenye ahụ.
Wụnye Java na kọmpụta gị n'otu ụzọ ahụ dịka usoro ọ bụla ọzọ.
Mgbe ọrụ NVIDIA na-arụ ọrụ ntanetị ga-eme ka nṅomi ahụ dị, na-akpaghị aka na-achọpụta ihe nlereanya nke kaadị vidiyo, nsụgharị na bitation nke sistemụ arụmọrụ, ịnwere ike ibudata ọkwọ ụgbọala dị mkpa. Gụọ ihe ọmụma na saịtị nbudata ma pịa bọtịnụ ahụ. "Download".
Nabata usoro nke nkwekọrịta nkwekọrịta n'otu ụzọ ahụ dị ka akọwapụtara na paragraf nke 5 nke Usoro 1 (akụkụ "Download"), ibudata faịlụ ahụ a ga-eme ma wụnye ya (nzọụkwụ 1-9 nke "Ntinye na kọmputa" Usoro 1).
NVIDIA software achọrọ maka ịrụ ọrụ ziri ezi na iji arụ ọrụ nke GeForce GT 630 kaadị ndịadị ga-arụnyere n'ime usoro gị. Anyị na-aga n'ihu tụlee usoro nrụnye ndị a.
Usoro nke 3: Onye ọrụ ikikere
Na ụzọ ndị a kọwara n'elu, na mgbakwunye na ọkwọ ụgbọala vidiyo n'onwe ya, arụnyere NVIDIA GeForce Experience program. Ọ dị mkpa iji mma-gụgharia kaadị nke arụ ọrụ kaadị ahụ, yana ịchọọ maka nsụgharị software ndị dị ugbu a, ibudata ma wụnye ha. Ọ bụrụ na arụnyere ngwa ngwa a na komputa gị, ị nwere ike ibudata ma wụnye ọkwọ ụgbọala ọhụrụ.
Gaa na GeForce Ahụmahụ, ma ọ bụrụ na usoro ahụ amalitebeghị (dịka ọmụmaatụ, chọta ụzọ mkpirisi ya na desktọọpụ, na menu "Malite" ma ọ bụ folda na diski usoro nke arụpụtara).
Na ngalaba ọrụ, chọta akara ngosi (ọ nwere ike ịchekwa ya na tray), pịa aka na ya wee họrọ "Mwepụta NVIDIA GeForce Ahụmahụ".
Chọta ngalaba "Ndị ọkwọ ụgbọala" ma banye n'ime ya.
Na nri (n'okpuru akara ngosi ngosi) pịa bọtịnụ "Lelee maka mmelite".
Ọ bụrụ na ịnweghị ụdị ọhụụ nke ọkwọ ụgbọala vidio kachasị ọhụrụ, a ga-amalite usoro ọchụchọ ya. Mgbe emechara, pịa "Download".
Usoro nbudata ga-ewe oge ụfọdụ, mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ga-ekwe omume ịga n'ihu na nwụnye.
Na ụzọ mbụ nke isiokwu a, anyị akọwaworị ihe dị iche n'etiti "Gosi nwụnye" site "Omenala". Họrọ nhọrọ nke ruru gị aka ma pịa bọtịnụ kwekọrọ.
A ga-amalite usoro nhazi maka nhazi, mgbe nke a gasịrị, ị ga-arụ ọrụ yiri usoro 7-9 nke akụkụ "Ntinye na kọmputa"kọwara na Usoro 1.
Achọghị ịchọrọ redio. Iji pụọ na windo Installer, pịa bọtịnụ. "Mechie".
Gụkwuo: Ịwụnye ọkwọ ụgbọala na NVIDIA GeForce Expirience
Usoro 4: Nlekọta ndị ọkachamara
Na mgbakwunye na ịga na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti rụrụ, site na iji ọrụ ịntanetị na ngwa ngwa, e nwere ụzọ ndị ọzọ ịchọta na ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala. Maka nzube ndị a, mepụtara ọtụtụ mmemme nke na-arụ ọrụ ma ma ọ bụ akpaka na akwụkwọ ntuziaka. A na-enyocha ndị na-ewu ewu na nke dị mfe na nke a na ntanetị anyị.
Gụkwuo: Mmemme maka imelite ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala na-akpaghị aka
Software a na-eme ka usoro nyocha, mgbe nke a gasịrị, ọ na-egosiputa ndepụta nke ngwaike ngwaike na ndị na-efu ma ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọala oge ochie (ọ bụghị naanị maka kaadị vidiyo). Naanị ị ga-achọ ịlele software dị mkpa ma malite usoro nwụnye.
Anyị na-atụ aro itinye nlebara anya pụrụ iche na DriverPack Solution, nke ị nwere ike ịhụ nduzi zuru oke iji njikọ dị n'okpuru ebe a.
Gụkwuo: Otu esi eji DriverPack Solution
Usoro 5: Ngwaọrụ ID
Ihe ọ bụla ngwaike arụnyere na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ nwere ihe nchọpụta pụrụ iche nke ya. Ịmara ya, ịnwere ike ịchọta ọkwọ ụgbọala dị mkpa. Maka NVIDIA GeForce GT 630 ID nwere ihe na-esonụ:
PC VEN_10DE & DEV_0F00SUSBSYS_099010DE
Kedu ihe ị ga-eme na ọnụ ọgụgụ a? Detuo ya ma pịnye na igbe nchọta na saịtị ahụ nke na-enye ike ịchọta na ibudata ndị ọkwọ ụgbọala site na NJ hardware. Ị nwere ike ịmatakwu banyere ụdị ọrụ ọrụ weebụ dị otú ahụ, ebe ị ga-enweta ID na otu esi eji ya, n'isiokwu na-esonụ:
Usoro 6: Ngwaọrụ Nhazi System
Nke a dị iche na usoro niile gara aga nke nyochaa akụrụngwa maka kaadị vidiyo na ọ chọghị iji ihe omume ndị ọzọ ma ọ bụ ọrụ ntanetị. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta Ịntanetị, ịnwere ike ịchọta ma melite ma ọ bụ wụnye ọkwọ ụgbọala na-efu "Onye njikwa ngwaọrụ"jikoro n'ime sistemụ. Usoro a na-arụ ọrụ nke ọma na Windows 10 PC Ị nwere ike ịchọpụta ihe ọ bụ na otu esi eji ya na ihe dị na njikọ n'okpuru.
Gụkwuo: Imelite ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala site na iji ngwaọrụ Windows
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere nhọrọ isii maka ịchọgharị, nbudata ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka NVIDIA GeForce GT 630 nkwụnye ihe ntanetị. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na ọkara nke ndị ahụ na-enye ha. Ndị ọzọ ga-aba uru na ikpe ebe ị na-achọghị ịrụ ọrụ ndị na-adịghị mkpa, ị maghị na ị maara ihe nlereanya nke vidiyo vidio a, ma ọ bụ na ịchọrọ ịwụnye ngwanrọ maka ihe ngwaike ndị ọzọ, n'ihi na ụzọ 4, 5, 6 nwere ike iji mee ihe ọ bụla ígwè.